Jery taratra… herinandro : soa… mahafanina | NewsMada
Tsy hita intsony izay marina amin’ny “Raharaha Soamahamanina”. Nambaran’ny filankevitry ny governemanta fa nampiandrasina aloha ny fitrandrahan’ny Sinoa volamena any an-toerana noho ny tsy fitovian-kevitry ny mponina.
Nefa nilaza ny tompon-tany any an-toerana fa mitohy andro alina ny fitrandrahana. Tsy afa-nanamarina izany any ifotony ny mpanao gazety, nosakanan’ny mpitandro filaminana fa hoe tsy naka fahazoan-dalana 24 ora mialoha.
Voalaza fa mizarazara ny mponina, fa misy ny manaiky fitrandrahana ary ao ny mitsipaka izay sahy miseho miharihary fa maro anisa. Milaza ireo vitsy anisa fa tsy mivarotra tanin-drazana fa mampanofa… Inona ny marina?
Nandefa taratasy any amin’ny filohan’ny Repoblika ny mpanao gazety, hetsika ho amin’ny fahalalahana maneho hevitra. Mba hangatahana fandinihana indray ny lalàn’ny fifandraisana izany, araka ny And. 59 amin’ny lalàmpanorenana.
Soa.. mahafanina ny “Raharaha Soamahamanina”, fa mampangetaheta ny amin’izay tena marina. Tonga hatramin’ny hoe takalon’ny fanaovan-dalàna amin’ny fanatanterahana ny Frankôfônia io fitrandraham-bolamena io (?).
Na efa miseho isan-taona aza, mahafanina fa tsy hita izay marina ny amin’ny fandoavana ara-potoana ny vatsim-pianaran’ny mpianatra eny amin’ny oniversite, Ankatso. Miafara amin’ny fampiasan-kerin’ny mpitandro filaminana…
Tsy hita koa izay marina ny amin’ny disadisa eo anivon’ny antoko Leader Fanilo, na efa nisy didim-pitsarana nivoaka aza, araka ny fitorian’ny andaniny. Ny ankilany, nanao filankevi-pirenena ihany fa tsy mbola mihatra ny didy.
Misy ny fitadiavan’ireo lehiben’ny fitsarana paikady hamerenana ny fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana. Tsy ny afitsoky ny fahefana mpanatanteraka ve no anisan’ny tsy atokisan’ny vahoaka ny fitsarana… fitaovana politika ihany?
Hisy amin’izay ny fiovana sy fandrosoana amin’izany? Tsy mbola hanomboka amin’ny 26 jolay ny fisondrotan’ny taxi-be, Antananarivo, ho 500 Ar. Na izany aza, tsy hita be ihany ny marina ny amin’ny fidangan’ny vidim-piainana.